BROUK Addressed Rohingya Refugees Issue At Global Stateless Forum | Myanmar Ethnic Rohingyas Human Rights Organization Malaysia (MERHROM)
← Myanmar Military speeds up release of children
Secretary-General, at Partnership Group on Myanmar Meeting, Says Parliament’s →
BROUK Addressed Rohingya Refugees Issue At Global Stateless Forum
source by :Rohingya Blogger
RB News September 25, 2014 Burmese Rohingya Organisation (BROUK) President, Tun Khin, joined the first Global Stateless Forum at the Hague, Holland from 15-17 September 2014. The Global Stateless Forum was co-hosted by UN High Commissioner for Refugees (UNH…
Rohingya Blogger: BROUK Addressed Rohingya Refugees Issue At Global Stateless Forum
Shared publicly – Yesterday 6:06 AM
DG of ARU speaks at the State Department’s Special Event “Displacement of Religious Minorities” at the United Nations General Assembly
RB News September 24, 2014 New York — U.S. State Department held the event “Displacement of Religious Minorities” at the 69th United Nations General Assembly on September 22, 2014, at the United Nations Plaza in New York. Dr. Wakar Uddin, Director General…
Rohingya Blogger: DG of ARU speaks at the State Department’s Special Event “Displacement of Religious Minorities” at the United Nations General Assembly
Shared publicly – Sep 21, 2014
(Photo: RB News) RB News September 20, 2014 A. Soma Khatun,a28 year old Rohingya woman, wife and mother, hadn’t recovered well from the birth of her second child. Her son, Abdur Rahman, came to the world justalittle over three months ago. Wife of Abdul…
Shared publicly – Sep 18, 2014
Aman Ullah RB Article September 17, 2014 (On the seven years commemoration of Saffron Revolution) Seven years ago, in 2007, thousands of barefooted monks chanting the Metta Sutta,aprayer of love and compassion, marched in cities across Burma including R…
Rohingya Blogger: The Saffron Revolution
ဌေးလွင်ဦး RB News 17.9.2014 သမိုင်းဖေါ်တာ မ “အ”အောင်လို့ ဆိုပြီး ဆရာကြီး ဒေါက်တာ သန်းထွန်းက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးရဲ့ ရင်ထဲက စကားလုံး စင်စစ် ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျွန်တော် မနှိုက်ထုတ်လိုပါ။ သို့သော် ယေဘုယျ အားဖြင့် လှမ်းမြင်ကြည့်သော် လူဆိုတာ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်…
RB News: တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုချင်လို့-
Shared publicly – Sep 16, 2014
A woman, who says she belongs to the Rohingya community from Myanmar, washes clothes as children play inacamp in New Delhi September 13, 2014. (Photo: REUTERS/Anindito Mukherjee) By Nita Bhalla Reuters September 15, 2014 NEW DELHI (Thomson Reuters Foundat…
Rohingya Blogger: Myanmar’s Rohingya stuck in refugee limbo in India
Shared publicly – Sep 15, 2014
ဒုရဲအုပ် ကျော်ကျော်နှင့် အဖွဲ့က ဒေသခံများထံမှ ရွှေ၊ငွေများ လုယက်
RB News 14.9.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ မြောက်ပိုင်း လိပ်ရကျေးရွာ အခြေစိုက် နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ် ကျော်ကျော် ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့သည် လိပ်ရ ကျေးရွာ အုပ်စု အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်၍ ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာများထံမှေ…
RB News: ဒုရဲအုပ် ကျော်ကျော်နှင့် အဖွဲ့က ဒေသခံများထံမှ ရွှေ၊ငွေများ လုယက်
Internally displaced Rohingya people take shelter inabuilding ahead of the arrival of Cyclone Mahasen, in Sittwe, northwestern Rakhine State, Myanmar, May 15, 2013. By Ron Corben Voice of America September 14, 2014 BANGKOK — This week U.N. officials visi…
Rohingya Blogger: UN Calls for More Aid to Rohingya Camps
By Alex Bookbinder Democratic Voice of Burma September 14, 2014 Restoring citizenship rights for more than 800,000 stateless people in Arakan State is the “key issue” the United Nations wants resolved, the UN’s Assistant Secretary-General Haoliang Xu told D…
Rohingya Blogger: The key issue for us is citizenship, says UN deputy chief
Shared publicly – Sep 13, 2014
Aman Ullah RB History September 12, 2014 In January 1947, Aung San ledasmall delegation to Landon to discuss Burma’s political future. The outcome of this visit was ‘Aung San-Atlee Agreement’, which was signed on 27th January 1947. According to that agree…
Rohingya Blogger: Rohingyas and Their Citizenship Rights
Shared publicly – Sep 12, 2014
မြို့မ ကညင်တန်း ကျေးရွာ ဈေး၌ ချဲဒိုင်များ တရားဝင်သဖွယ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ
MYARF RB News 11.9.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ မြို့မကညင်တန်း ကျေးရွာ ဈေးတွင် ချဲဒိုင်များ ဖွင့်လှစ်၍ တရားဝင် လောင်းကစား သဖွယ် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ မောင်တောမြို့နယ် မြို့မကညင်တန်း ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးအနီး…
RB News: မြို့မ ကညင်တန်း ကျေးရွာ ဈေး၌ ချဲဒိုင်များ တရားဝင်သဖွယ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ
ရဲစခန်း အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် ဒေသခံများထံမှ အတင်း အဓမ္မ ငွေကောက်ခံ
RB News 11.9.2014 ဘူးသီးတောင် ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်၊ ခြင်းသမား ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ရဲစခန်း အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာများထံမှ အတင်း အဓမ္မ ငွေကောက်ခံလျက် ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ခြင်းသမား ကျေးရွာ အုပ်စုတွင…
RB News: ရဲစခန်း အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် ဒေသခံများထံမှ အတင်း အဓမ္မ ငွေကောက်ခံ
By ICRC September 11, 2014 Five months after violence disrupted humanitarian operations in Rakhine state, the ICRC has restartedafull range of activities there for the Muslim and ethnic Rakhine communities alike. “The Muslim and ethnic Rakhine communities…
Rohingya Blogger: Myanmar: Violence in Rakhine creates long-term needs
Increased aid essential for all vulnerable residents in Rakhine, say senior UN officials
United Nations Development Program regional director for Asia and the Pacific Wu Haoliang (front) and other officials make their way to Nget Chaung IDP camp at Pauktaw Township in Rakhine State earlier this month. Photo: UNDP Myanmar By Geoffrey Goddard Mi…
Rohingya Blogger: Increased aid essential for all vulnerable residents in Rakhine, say senior UN officials
Shared publicly – Sep 11, 2014
ဒုချီရားတန်းမှ ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာ များ၏ နွားများကို ရခိုင်များက လုယက်
Rohingya Eye RB News 10.9.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် တောင်ပိုင်း ဒုချီးရားတန်း ကျေးရွာ အုပ်စုမှ ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာ များ၏ နွားများကို ခရေမြိုင်ရွာမှ ရခိုင်များက လုယက် ယူသွားကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ သြဂုတ်လ (၉) ရက်နေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ အချ…
RB News: ဒုချီရားတန်းမှ ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာ များ၏ နွားများကို ရခိုင်များက လုယက်
2015 Election And Challenges To Myanmar’s Political Transition
Burma’s Thein Sein. Photo by Chatham House, Wikipedia Commons. By Shankari Sundararaman, IPCS Eurasia Review September 10, 2014 Recent changes shaping Myanmar’s transition process have highlighted the tenuousness of the Process in that country. Even as the …
Rohingya Blogger: 2015 Election And Challenges To Myanmar’s Political Transition
Shared publicly – Sep 10, 2014
မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တရားမျှတမှုကို မျှော်လင့်နေသူ
မဝေဝေနု (ဓာတ်ပုံ – Reuters) သင်းလဲ့ဝင်း (Reuters) ဧရာဝတီ 9.9.2014 အသက် ၂၇ နှစ် အရွယ် မဝေေ၀နုရဲ့ သွေးကြောထဲမှာ ဒီမိုကရေစီ အရေး လှုပ်ရှားလိုမှုတွေ စီးဆင်းနေပုံရပြီး သူ့ရဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှား လိုမှုက မွေးကတည်းက ဗီဇ ပါလာတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ မဝေဝေနုဟာ သူ့ရဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကာ…
RB News: မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တရားမျှတမှုကို မျှော်လင့်နေသူ
Plz fri request sis
The UN’s Assistant Secretary-General Haoliang Xu. (Photo: UNDP) By Alex Bookbinder Democratic Voice of Burma September 9, 2014 A senior United Nations delegation departed for the Arakan State capital of Sittwe on Monday to “take stock of the ongoing humanit…
Rohingya Blogger: Senior UN officials head to Arakan
Shared publicly – Sep 9, 2014
Aung San Suu Kyi gestures at her supporters to sit down during an entertainment show ataceremony to mark Burma’s New Year Day in her constituency of Kawhmu township on 17 April 2012. (Photo: Reuters) By Shwe Aung Democratic Voice of Burma September 8, 201…
Rohingya Blogger: Burmese MPs react differently to cancellation of by-elections
Shared publicly – Sep 8, 2014
Alan Morison and Chutima Sidasathian face defamation charges brought by the Royal Thai Navy. (Photo: Phuketwan) By Feliz Solomon Democratic Voice of Burma September 7, 2014 The tragic story of Burma’s boatpeople is now known the world over; countless Rohin…
Rohingya Blogger: Picking on the little guys: Phuketwan
Shared publicly – Sep 7, 2014
In this file picture from May, Muslim men offer Friday prayers inamakeshift mosque in Sittwe, Arakan state. (Photo: Reuters) By Colin Hinshelwood Democratic Voice of Burma September 6, 2014 The Burmese Muslim Association (BMA) has vehemently condemneda…
Rohingya Blogger: Burmese Muslims reject ‘morally repugnant’ Al-Qaeda
Shared publicly – Sep 6, 2014
OIC ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ စစ်တွေမှာ ဆွေးနွေး
မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ OIC အထူး ကိုယ်စားလှယ် မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်း Mr. Tan Sri Syed Hamid Albar (ဝဲစွန်) နဲ့အဖွဲ့ စက်တက်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့ ECC ရုံးမှာ ရပ်မိရပ်ဖတွေ၊ အရပ်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်တွေ တွေ့ဆုံစဉ် RFA မြန်မာပိုင်း 4.9.2014 OIC ခေါ် အ…
RB News: OIC ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ စစ်တွေမှာ ဆွေးနွေး
Myanmar flatly denies agreeing to resettle Rohingyas
Refugees at one of the unofficial camps in the Cox’s Bazar district of Bangladesh. (Photo: Rock Ronald Rozario) By John Zaw, Mandalay UCA News September 5, 2014 Myanmar officials have refuted media reports that Myanmar would resettle thousands of Rohingya l…
Rohingya Blogger: Myanmar flatly denies agreeing to resettle Rohingyas
Burma’s census scam
By Saudi Gazette Editorial September 4, 2014 The United Nations and international donors have allowed themselves to become party toadangerous fraud in Burma. Using outside funding from these bodies, the country has just conducted its first census in 30 ye…
Rohingya Blogger: Burma’s census scam
Myanmar’s missing millions The leftovers
By T. J. The Economist September 4, 2014 MYANMAR has just found out that 9m-odd people it had thought were living within its borders actually do not. In fact most of them don’t live anywhere at all. The first census in three decades puts Myanmar’s populati…
Rohingya Blogger: Myanmar’s missing millions The leftovers
Aman Ullah RB Article September 4, 2014 In 1962, General Ne Win ledacoup d’état and establishedanominally socialist military government that sought to follow the “Burmese Way to Socialism.” The Ne Win government nationalized the economy and pursuedapo…
Rohingya Blogger: General Ne Win and 1982 Citizenship Law
Rohingya Event At The 51st ISNA Convention Held In Detroit, Michigan, USA
RB News September 4, 2014 Detroit, Michigan, USA — Over 25,000 people attended the 51st Convention of the Islamic Society of North America. Held at the Cobo Convention Center in Detroit, Michigan, President Jimmy Carter was the keynote speaker. Among the n…
Rohingya Blogger: Rohingya Event At The 51st ISNA Convention Held In Detroit, Michigan, USA
Shared publicly – Sep 3, 2014
အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦးကို BGP များက မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်
Rohingya Eye RB News 2.9.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း အထက်ပြူးမ ကျေးရွာမှ အသက် (၁၈) နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦးကို နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များက ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်၍ မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ သြဂုတ်လ (၂…
RB News: အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦးကို BGP များက မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်
European Council President Van Rompuy welcomes Burma’s President Thein Sein at the European Union Council in 2013. (Photo: Reuters) By Democratic Voice of Burma September 2, 2014 President Thein Sein flew out of Naypyidaw on Monday evening to begina10-day…
Rohingya Blogger: President Thein Sein embarks for Europe
Photo: REUTERS/Chaiwat Subprasom By Philip Heijmans The Diplomat September 2, 2014 Rights groups are outraged that the census has failed to recognize an oppressed minority. Provisional results from Myanmar’s first census in 30 years released over the weeken…
Rohingya Blogger: Myanmar’s Controversial Census
Shared publicly – Sep 1, 2014
BGP များ သေနတ်ပစ်၍ လူထုကို ခြိမ်းခြောက်၊ ရိုက်နှက်၊ ငွေညှစ်များ ပြုလုပ်
Rohingya Eye RB News 31.8.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း လောင်းဒုံး ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မ.က.ဖ တို့၏ အမည်ခံ လူဦးရေ စာရင်း ကောက်ခံခြင်းတွင် ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာများ ပါဝင်ရန် ငြင်းဆန် သဖြင့် သေနတ် ပစ်ဖောက…
RB News: BGP များ သေနတ်ပစ်၍ လူထုကို ခြိမ်းခြောက်၊ ရိုက်နှက်၊ ငွေညှစ်များ ပြုလုပ်
By BDNews24 August 31, 2014 Myanmar will start the process of repatriating Rohingya refugees living in Bangladesh’s camps within two months in ‘a breakthrough’ in bilateral relations, the foreign secretary has said. M Shahidul Haque said they would start th…
Rohingya Blogger: Myanmar to start taking back Rohingya refugees from Bangladesh in two months
Shared publicly – Aug 31, 2014
A census enumerator takes answers fromafamily in Rangoon, April 2014. (Photo: DVB) By Democratic Voice of Burma August 30, 2014 Burma’s Ministry of Immigration and Population released provisional census data on Saturday, showing that the country hasapop…
Rohingya Blogger: Burma reveals initial census data
Shared publicly – Aug 30, 2014
စစ်တပ်နှင့် နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ တို့ပူးပေါင်း၍ ၀ါးချ ကျေးရွာမှ ရိုဟင်ဂျာများ ထံမှ လုယက်၊ ရိုက်နှက်
MYARF RB News 29.8.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် တောင်ပိုင်း ၀ါးချ ကျေးရွာသို့ စစ်တပ်၊ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ စ.ရ.ဖ၊ အထူး သတင်းတပ်ဖွဲ့နှင့် မ.က.ဖ တို့ဝင်ရောက်ပြီး လူဦးရေ စစ်ဆေးခြင်းကို အကြောင်းပြ၍ ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာများ ထံမှ ပစ္စည်းများ လ…
RB News: စစ်တပ်နှင့် နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ တို့ပူးပေါင်း၍ ၀ါးချ ကျေးရွာမှ ရိုဟင်ဂျာများ ထံမှ လုယက်၊ ရိုက်နှက်
Gen. Maung Maung Ohn attends the opening ceremony ofahigh school in Myawaddy, Karen State, as deputy minister for border affairs in 2013. (Photo: Kyaw Kha / The Irrawaddy) By Nyein Nyein The Irrawaddy August 29, 2014 The Arakan State government has sought…
Rohingya Blogger: Arakan Govt Clarifies Budget Confusion After Uproar
မေယု ဂေါက်ကွင်းမှ စစ်သားများက ကလေးငယ်များထံမှ လုယက်၍ လူမဆန်စွာ ရိုက်နှက်
MYARF RB News 29.8.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် ဝေသာလီ (ရခိုင်ရွာ)၊ မေယုဂေါက်ကွင်းရှိ စစ်စခန်းမှ စစ်သားများက ကလေးငယ်များထံမှ အစားအစာများ လုယက်ယူသည့် အပြင် လူမဆန်စွာ ရိုက်နှက် ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ သြဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့ နံနက် (၉) နာရ…
RB News: မေယု ဂေါက်ကွင်းမှ စစ်သားများက ကလေးငယ်များထံမှ လုယက်၍ လူမဆန်စွာ ရိုက်နှက်
Shared publicly – Aug 29, 2014
BGP နှင့် မ.က.ဖ တို့၏ စစ်ဆေးမှုကို ငြင်းဆန်သည့် ကြိမ်ကျောင်း ရွာသားများ ဖမ်းဆီးခံရ
MYARF RB News 28.8.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း ကြိမ်ချောင်း ကျေးရွာ အုပ်စုသို့ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မ.က.ဖ တို့ရောက်ရှိပြီး ၎င်းတို့၏ စစ်ဆေးမှုကို ငြင်းဆန်သူ များကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ သြဂုတ်လ (၂၈) ရက်နေ…
RB News: BGP နှင့် မ.က.ဖ တို့၏ စစ်ဆေးမှုကို ငြင်းဆန်သည့် ကြိမ်ကျောင်း ရွာသားများ ဖမ်းဆီးခံရ
By First Post August 28, 2014 Washington : US President Barack Obama will visit China, Burma and Australia in November as part of his administration’s Asia Pacific re-balance strategy to attend key regional summits and meet G-20 leaders,asenior US officia…
Rohingya Blogger: Obama to travel to China, Burma and Australia in November
Shared publicly – Aug 28, 2014
Will Foreign Policy Success of Obama Place Burma In Proxy Hot War?
President Barack Obama meets with President Thein Sein of Burma. (Official White House Photo by Pete Souza) By Kanbawza Win Eurasia Review August 27, 2014 President’s Obama’s foreign policy struggles in Afghanistan, Iraq, Libya, Syria, Palestine and most of…
Rohingya Blogger: Will Foreign Policy Success of Obama Place Burma In Proxy Hot War?
မောင်တော အ.လ.က ကျောင်းသားများ ယာယီ ကဒ်ပြား မလိုချင်၍ ကျောင်းမတက်
MYARF RB News 27.8.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်ရှိ အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးက ရိုဟင်ဂျာ ကျောင်းသား/သူ များထံမှ ငွေကောက်ခံ၍ ယာယီ သက်သေခံ ကဒ်ပြားများ ထုတ်ပေးလျက် ရှိသောကြောင့် ကျောင်းသား/သူများ ကျောင်းမတက်…
RB News: မောင်တော အ.လ.က ကျောင်းသားများ ယာယီ ကဒ်ပြား မလိုချင်၍ ကျောင်းမတက်
United Nations special envoy to Myanmar Vijay Nambiar (right) talks with residents of an IDP camp at Myae Pone Township in Rakhine State on August 24. Mr Nambiar visited Rakhine from August 23 to 25. Photo: Nyunt Win/EPA By Kay Zue Mizzima August 27, 2014 …
Rohingya Blogger: Rakhine government delays IDP resettlement plan, says ECC
Shared publicly – Aug 27, 2014
Rohingya Muslims pass time near their shelter atarefugee camp outside Sittwe, on June 4, 2014. Over 140,000 people, mostly Rohingya, have been living in sprawling, squalid displacement camps in Rakhine following two bouts of violence in 2012. REUTERS/Soe …
Rohingya Blogger: Will the Rohingya, driven from their homes, spend the rest of their lives segregated in ghettoes?
By Krista R. Burdine World Religion News August 27, 2014 THE SITUATION IN MYANMAR WORSENS, AND POLITICIANS ARE HAVING TROUBLE EVEN SPEAKING OF THE ROHINGYA VICTIMS WHO MAY BE FORCED INTO CONCENTRATION CAMPS. Ostensibly asaresult of the amount of violence…
Rohingya Blogger: Myanmar: Rohingya Minority May Suffer Concentration Camps
By Press TV August 27, 2014 Displaced Rohingya Muslims living in New Delhi are facing extereme conditions, Press TV reports. Hundreds of Rohingya Muslims displaced from Myanmar are now living in the Indian capital, New Delhi. Most of the refugees inacamp …
Rohingya Blogger: Rohingyas in extreme conditions in India
ယုံကြည်ချက် အပြည့်နဲ့ အရဲစွန့် လုပ်ဖို့ မြန်မာကို ကုလ တိုက်တွန်း
ဒေါ်လှလှသန်း ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း 26.8.2014 မြန်မာနိုင်ငံကို သီတင်း တစ်ပတ်ကြာ ရောက်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူး အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဘီဂျေး နမ်ဘီယားဟာ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို အဆုံးသတ် လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ…
RB News: ယုံကြည်ချက် အပြည့်နဲ့ အရဲစွန့် လုပ်ဖို့ မြန်မာကို ကုလ တိုက်တွန်း
အမည်ခံ လူဦးရေ စစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင် စစ်ဆေးမခံဘဲ ငါးဖမ်းသဖြင့် ငွေညှစ်ခံရ
MYARF RB News 25.8.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မ.က.ဖ တို့ ပူးပေါင်း၍ လူဦးရေ စာရင်း စစ်ဆေးသည်ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်၍ န.စ.က ကဲ့သို့ အတင်းအဓမ္မ ဘင်္ဂလီ ဇတ်သွင်းရာတွင် ပါဝင်ရန် ငြင်းဆိုသူ များကို ငါးဖမ်းခွင့် ပိတ်ပင…
RB News: အမည်ခံ လူဦးရေ စစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင် စစ်ဆေးမခံဘဲ ငါးဖမ်းသဖြင့် ငွေညှစ်ခံရ
Tawwin Hninsi Phyu
Shared publicly – Yesterday 6:22 AM
Aman Ullah RB Article September 24, 2014 The draft of the 1982 Myanmar Citizenship law was approved and passed by the third session of the Third Pyithu Hluttaw and promulgated by the Chairman of the Council of State, on 15 October 1982, “after long six year…
Rohingya Blogger: The Present Government and 1982 Citizenship Law
Shared publicly – Yesterday 5:58 AM
Press Release Date: September 23, 2014 We, the leadership and members of the Rohingya American Society (RAS) strongly condemn the forced Bengalization attempt of President Thein Sein Government to helpless Rohingya native of the soil of Arakan (Rakhine-prey…
Shared publicly – Sep 20, 2014
Photo: UNDP Myanmar Rakhine’s humanitarian operations have trickled back since March By IRIN September 19, 2014 SITTWE — Nearly six months after international aid workers fled Myanmar’s Rakhine State when Buddhist mobs attacked their offices and accused th…
Rohingya Blogger: Intimidation, uncertainty mar aid work in Myanmar’s Rakhine State
Majority of the displaced Muslim children receive only two hours of informal educationaday (Photo:AP) By Democratic Voice of Burma September 17, 2014 Only eight percent of displaced Muslim children in western Burma’s Arakan State have access to secondary …
Rohingya Blogger: Access to education ‘minimal’ in Arakan camps: official
Photo: David Swanson/IRIN Despite promises “Rohingya” was not included on the 2014 census By IRIN September 15, 2014 BANGKOK – Already widely reduced to statelessness and in many cases forced into camps for displaced people, an 800,000-strong population of …
Rohingya Blogger: Briefing: Myanmar’s “Rohingya” – what’s inaname?
လောင်းဒုံး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းဂေါင်းရွာ အပြစ်မဲ့ ဒေသခံ ၄ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
RB News 14.9.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ လောင်းဒုံးကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကျွန်းဂေါင်း ကျေးရွာသို့ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၀င်ရောက်ပြီး အမည်ခံ လူဦးရေ စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ပြီးနောက် အပြစ်မဲ့ ဒေသခံ ၄ ဦးကို ဖမ်းဆီး သွားကြောင်း သတင်း ရရှိ…
RB News: လောင်းဒုံး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းဂေါင်းရွာ အပြစ်မဲ့ ဒေသခံ ၄ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
Rakhine State to receive K1 billion from presidential reserve fund
Photo: President’s Office By Kay Zue Mizzima September 12, 2014 Development activities in Rakhine State will be allocated more than K1 billion (US$1 million) during the 2014-2015 fiscal year from President U Thein Sein’s presidential reserve fund, the Rakh…
Rohingya Blogger: Rakhine State to receive K1 billion from presidential reserve fund
By Pankaj Karmakar The Daily Star September 14, 2014 Withasmile on his face, sexagenarian Abu Sayeed was walking to his home at the Rohingya refugee camp at Kutupalong of Ukhia on Thursday. He was carryingashopping bag packed with rice, pulses and vege…
Rohingya Blogger: Food cards for 32,000 Rohingya refugees
Panel Session on Rohingya at 51st ISNA Convention in Detroit, Michigan, USA; “Rohingya Muslim and Islam in Myanmar: A Population andaFaith Under Threat of Extermination”
RB News 12.9.2014 Detroit, Michigan, USA — An Exhibition andapanel session on the plight of Rohingya ethnic minority in Burma/Myanmar were some of highlights at the 51st Annual Convention of the Islamic Society of America (ISNA), held at the Cobo Center …
Rohingya Blogger: Panel Session on Rohingya at 51st ISNA Convention in Detroit, Michigan, USA; “Rohingya Muslim and Islam in Myanmar: A Population andaFaith Under Threat of Extermination”
လိပ်ရကျေးရွာတွင် BGP များ ၀င်ရောက်၍ ဒေသခံများ ပစ္စည်းများ ဖျက်ဆီး
RB News 11.9.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် ကျောက်ချောင်း ကျေးရွာ အုပ်စုသို့ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၀င်ရောက်၍ ဒေသခံများ၏ ပစ္စည်းများ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပို…
RB News: လိပ်ရကျေးရွာတွင် BGP များ ၀င်ရောက်၍ ဒေသခံများ ပစ္စည်းများ ဖျက်ဆီး
မအေးအေးမာ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း 11.9.2014 ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းက စစ်တွေမြို့မှာ ညမထွက်ရ အမိန့်ကို စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ UNDP ခေါ် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီ အစဉ်ရုံးရဲ့ လက်ထောက် အုပ်ချုပ် ရေးမှူးနဲ့ အာရှ ပစိဖိတ် ဒေသ ဆိုင်ရာ…
RB News: စစ်တွေ ညမထွက်ရ အမိန့် ရုပ်သိမ်း
we petition the obama administration to: Mr. President, Don’t Backtrack, Step Up and Recognize the Rohingya In your 2012 trip to Myanmar, you made an extraordinary powerful statement aboutahighly persecuted ethnic group in Burma, demonstrating your humani…
Rohingya Blogger: Mr. President, Don’t Backtrack, Step Up and Recognize the Rohingya
Rohingya Muslim women look out from their home at Aung Mingalar quarter in Sittwe August 13, 2013. Photo: Reuters/Soe Zeya Tun By Aung Hla Tun and Jared Ferrie Reuters September 11, 2014 Myanmar on Thursday liftedacurfew imposed in June 2012 when clashes …
Rohingya Blogger: Myanmar lifts curfew in violence-racked state capital
The Burmese police force continues to inflict torture on prisoners despite prohibition (Photo: DVB) By Democratic Voice of Burma September 10, 2014 As the 27th session of the United Nations Human Rights Council convened this week,alegal advisory group has…
Rohingya Blogger: Burmese police still torture detainees, UN told
Aid group could return to Rakhine state this month, health official says
By John Zaw, Mandalay UCA News September 10, 2014 Health officials in Myanmar’s Rakhine state say the government will meet with aid group Médecins Sans Frontières-Holland this week for discussions that could see medical operations by MSF resume later this m…
Rohingya Blogger: Aid group could return to Rakhine state this month, health official says
Men in uniform carrying weapons patrol Meiktila, Myanmar where Buddhists and Muslims clashed in March 2013. A new legislation would condition U.S. security assistance funds to the Asian country to its human rights and pro-democracy efforts. Photo by: Kadir …
Rohingya Blogger: US Congress considers restricting Myanmar security assistance
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ မေးမြန်းဖို့ နယ်သာလန် အစ္စလာမ်မစ်အဖွဲ့ တောင်းဆို
RFA မြန်မာပိုင်း 9.9.2014 မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် တွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ် ခွဲခြား ပြုမူ ဆက်ဆံ နေတာ တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နယ်သာလန် နိုင်ငံကို ရောက်ရှိ နေတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို မေးခွန်း ထုတ်ဖို့ နယ်သာလန် အခြေစိုက် အစ္စလာမ်မစ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က အစိုးရကို မေ…
RB News: သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ မေးမြန်းဖို့ နယ်သာလန် အစ္စလာမ်မစ်အဖွဲ့ တောင်းဆို
By Tim McLaughlin Myanmar Times September 9, 2014 AID group Médecins Sans Frontières-Holland has signedanew memorandum of understanding with the Ministry of Health,astep the group says it hopes will speed up its efforts to begin working again in Rakhin…
Rohingya Blogger: MSF signs new agreement with govt, eyes Rakhine return
လူဦးရေ စာရင်းကို အကြောင်းပြု၍ BGP များက ရိုက်နှက်၊ လုယက်မှုများ ပိုမိုပြုလုပ်လျက်ရှိ
MYARF RB News 8.9.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများသို့ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မ.က.ဖ အဖွဲ့ဝင်များ ၀င်ရောက်၍ လူဦးရေ စာရင်း ကောက်ခံခြင်းကို အကြောင်းပြပြီး ရိုက်နှက်၊ လုယက်မှုများကို ပိုမို ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိ…
RB News: လူဦးရေ စာရင်းကို အကြောင်းပြု၍ BGP များက ရိုက်နှက်၊ လုယက်မှုများ ပိုမိုပြုလုပ်လျက်ရှိ
Tin Aye, right, chairman of Myanmar’s Union Election Commission, talks to journalists duringapress conference along with members of the commission after meeting with representatives of political parties at Myanmar Peace Center in Yangon, Myanmar Sunday, S…
Rohingya Blogger: Myanmar Cancels Planned Parliamentary by-Elections
လူဦးရေ စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့မှ ဒေသခံ များကို ရိုက်နှက်၍ နေအိမ်များ ဖျက်ဆီး
Rohingya Eye RB News 7.9.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများသို့ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရောက်ရှိလာပြီး လူဦးရေ စာရင်း စစ်ဆေးခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာ များကို ရိုက်နှက်ခြင်း၊ နေအိမ်များ ဖျက်ဆီးခြင်းများ ပြုလုပ…
RB News: လူဦးရေ စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့မှ ဒေသခံ များကို ရိုက်နှက်၍ နေအိမ်များ ဖျက်ဆီး
BMA vehemently condemn the statement of Al Qaeda leader Date: September 5, 2014 Burmese Muslim Association vehemently condemns the statement of the Al-Qaeda leader who threatened Burma in his latest video. BMA also condemn the terrorist group called, ISIS –…
Rohingya Blogger: BMA vehemently condemn the statement of Al Qaeda leader
Protesters with anti-OIC stickers and posters demonstrate in Sittwe, Nov. 15, 2013. (Photo: AFP) By Radio Free Asia September 5, 2014 The Organisation of Islamic Cooperation (OIC),agroup of 57 Muslim nations, has offered to buildahospital and set up oth…
Rohingya Blogger: Myanmar’s Conflict-Hit Rakhine State Wants OIC Aid Put Off
နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဦးစားပေးဖို့ ဂျာမန် ၀န်ကြီးချုပ် မြန်မာကို တိုက်တွန်း
ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း 4.9.2014 တိုင်းရင်းသား လူမျိုး အများ အပြား ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ အတွက် ငြိမ်းချမ်းမှု လိုအပ်တယ်လို့ ဂျာမနီ ဝန်ကြီးချုပ် Angela Merkel က ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖ…
RB News: နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဦးစားပေးဖို့ ဂျာမန် ၀န်ကြီးချုပ် မြန်မာကို တိုက်တွန်း
By AFP September 4, 2014 Berlin — Chancellor Angela Merkel on Wednesday pledged further economic support for Myanmar if it holds fair elections next year and does more to protect ethnic minorities. After talks with Myanmar’s President Thein Sein, Merkel to…
Rohingya Blogger: Merkel vows backing for Myanmar in return for minority rights
Photo: Kyle Knight/IRIN Announcements that Bangladesh’s Rohingya will go home met with mixed emotions. By IRIN September 4, 2014 DHAKA — Bangladesh announced this week that it will send back over 2,000 Muslim Rohingya refugees to Myanmar, stoking concerns …
Rohingya Blogger: Concern over Bangladesh move to repatriate Rohingyas to Myanmar
BGP နှင့် စစ်သား များက ၀ါးချကျေးရွာရှိ နေအိမ်များမှ ပစ္စည်းများ လုယက်၊ ဖျက်ဆီး
Rohingya Eye RB News 2.9.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် တောင်ပိုင်း ၀ါးချ ကျေးရွာရှိ ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာ များ၏ နေအိမ်များသို့ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၀င်ရောက်၍ ပစ္စည်းများ ဖျက်ဆီး လုယက် ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ သြဂုတ်လ (၂၈) ရက်နေ့တွင…
RB News: BGP နှင့် စစ်သား များက ၀ါးချကျေးရွာရှိ နေအိမ်များမှ ပစ္စည်းများ လုယက်၊ ဖျက်ဆီး
Activist Wai Wai Nu at her office in Yangon, Myanmar, Photo taken by Thin Lei Win Jul 28. 2014. By Thin Lei Win Thomson Reuters Foundation September 2, 2014 YANGON – Wai Wai Nu isadiminutive 27-year-old with pro-democracy activism in her genes andaquart…
Rohingya Blogger: PROFILE-Young Rohingya woman chases dream of peace and justice in Myanmar
(Image courtesy Wycliffe Associates) By World Mission September 2, 2014 Myanmar, formerly known as Burma, is atacrossroads. Three months ago, Burma was consideringacontroversial “Religious Conversion Law.” It bore resemblance to the anti-conversion laws…
Rohingya Blogger: Religion laws, Myanmar, and the future of the Church
Children, part ofagroup of asylum seekers, sit inatruck as Thai immigration officials escort them toacourt in Songkhla, southern Thailand, on March 15, 2014 (Tuwaedaniya Meringing—AFP/Getty Images) By Charlie Campbell TIME September 2, 2014 A prominen…
Rohingya Blogger: Thousands of Refugee Children Are Suffering in Thai Detention
အမည်ခံ လူဦးရေ စစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင် စစ်ဆေး မခံသူများ၏ လုပ်ငန်းများ၊ ဆေးကုသခွင့်များ ပိတ်ပင်ခံနေရ
Rohingya Eye RB News 31.8.2014 မောင်တော ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မ.က.ဖ တို့၏ အမည်ခံ လူဦးရေ စာရင်း ကောက်ခံမှုတွင် ပါဝင် စစ်ဆေး မခံသူများ၏ လုပ်ငန်းများ၊ ဆေးကုသခွင့်များကို အာဏာပိုင် များက ကန့်သတ် ပိတ်ပင်လျက် ရှိကြော…
RB News: အမည်ခံ လူဦးရေ စစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင် စစ်ဆေး မခံသူများ၏ လုပ်ငန်းများ၊ ဆေးကုသခွင့်များ ပိတ်ပင်ခံနေရ
Aman Ullah RB History August 30, 2014 Following the 1935 Government of India Act’s reforms, the British granted Burmaalarger autonomous status with the Government of Burma Act . However, with very few educated Burmese available to do the necessary tasks, …
Rohingya Blogger: Muslims of Arakan and Baxter Report
Rohingya Event At 51st ISNA Convention In Detroit, Michigan
Rohingya Blogger: Rohingya Event At 51st ISNA Convention In Detroit, Michigan
Photo: Anurup Kanti Das By Ananta Yusuf The Daily Star August 29, 2014 This week the Star interviewsaRohingya refugee who shares his experience of surviving the atrocities perpetrated by the Myanmarese (Burmese) junta It wasacloudy night of September 1…
Rohingya Blogger: Surviving A Genocide
By BBC News August 29, 2014 Myanmar’s first census in more than 30 years has revealed that the country has9million fewer people than it thought. The country’s last national survey was in 1983 and until now the government had estimated that the total popul…
Rohingya Blogger: Myanmar’s census falls9million short of estimate